Naas Nuujintu Waxay Hooyooyinka Ka Difaacdaa Cudurka Macaanka - Daryeel Magazine
Naas Nuujintu Waxay Hooyooyinka Ka Difaacdaa Cudurka Macaanka
Daraasad cusub oo Maraykan ah ayaa daaha ka fayday faa’iidooyin cusub oo naas nuujintu ay leedahay, laakiinse markan waa hooyada laftigeeda ,iyada oo ay muujisay in hooyooyinka si dabiiciya u naas-nuujiya carruurtooda in ay hoos u dhacday haleelitaanka halista nuuca 2aad ee macaanka.
Cilmi-baadhistan ayaa waxa sameeyay Kaiser Permanente Medical Center oo ku yaala Oakland, California, waxana lagu daabacay natiijada daraasadan cadadkeedii ugu dambeeyey Majalad cilmiyeedka “Annals of Internal Medicine”.
Daraasadan ayaa waxa baadhitaan lagu sameeyay xogta 1035 haween 2 sano kadib markii ay haleeshay sonkorta xilliga uurka ee loo yaqaano (gestational diabetes), waxana la ogaaday 12% ka mid ah in uu haleelay cudurka macaanka nuuca 2aad markii dambe.
Cilim baadhe dabagal ku haysay ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in haweenkii si nidaamsan u sameeyay naas-nuujinta dabiiciga ah in ay ku guulaysteen yareenta fursadaha haleelitaanka cudurka macaanka nuuca 2aad inta u dhaxaysa 12% ilaa iyo 17%, iyada heerarka (glucose) ku uu hoos u dhacay intii ay ku guda jireen naas-nuujinta, waxa sido kale hoos u dhacday baahida (insulin)ta.
Cilmi-baadhayaalkan ayaa cadeeyay in naas-nuujinta dabiiciga ah mudo 2 bilood ah, ay xidhiidh la leedahay hoos u dhaca 50% halista macaanka nuuca labaad ee hooyooyinka kolkii hore dhab ahaan u nuglaa in uu haleelo macaanka xilliga uurka, waxana mar kaste oo ay dheeraato muddada naas-nuujinta dabiicigu kordhaysa heerka ilaalinta ee cudurka macaanka .
Dr. Erika Gunderson oo ahayd haweynada hogaaminaysay kooxdan baadhayaalka ah ayaa sheegtay haweenka ka cabanayay dhibaatada buurnida ama macaanka xilliga uurka in ay yihiin kuwa ugu baahi badan in ay diiradda saaraan naas-nuujitinta dabiiciga ah si ay uga hortagaan halista macaanka nuuca 2aad.
Cunista Shukulaatada Madow Waxay Kaa Difaaci Kartaa Macaanka Iyo Cudurrada Wadnaha
Qaabab Cusub Oo La Iskaga Ilaalin Karo Cudurka Macaanka Nooca Labaad (Type 2 Diabetes)
Beedka Oo La Ogaaday Inuu Ragga Ka Ilaaliyo Cudurka Macaanka